Duqeyn khasaare geystay oo ka dhacday deegaano ka tirsan Jubbada dhexe & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Duqeyn khasaare geystay oo ka dhacday deegaano ka tirsan Jubbada dhexe &...
Duqeyn khasaare geystay oo ka dhacday deegaano ka tirsan Jubbada dhexe & Wararkii ugu dambeeyay
Bu’aale (Halqaran.com) – Duqeyn diyaaradeed ayaa ka dhacday Gobolka Jubbada dhexe, waxaana duqeynta fuliyay dowladda Mareykanka.
Warsaxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta dowladda Federalka Somaliya ayaa lagu faah faahiyay duqeyntaasi.
Fiidnimadii 16-ka Dicember 2019: Dowladda Federaalka ee Soomaaliya oo kaashaneysa Howlgalka Saaxiibada Mareykanka ayaa fulisay duqeyn xagga cirka ah oo ka dhan ah Xagjirka al-Shabaab meel u dhow Dujumma oo qiyaastii 6Km u jirta Magaalada Bu’aale ee Gobalka Jubada Dhexe Soomaaliya.
Waxaa la Xaqiijiyey in hal qof oo Al-Shabaab ah lagu dilay duqeynta.
Sidoo kale waxaa haatan la xaqiijiyey inaysan jirin qof rayid ah oo waxyeelo kasoo gaartey.
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada Mareykanka ayaa wada dadaal dheeri ah si looga hortago waxyeelada soo gaarta rayidka iyo in la horkeeno cadaalada hogaamiyaasha muhiimka ah ee fuliya weerarada ka dhanka ah shacabka aan waxba galabsan.
Howlgalkan wuxuu muujinayaa ka go’naanshaha dowlada iyo saaxiibada sii wadida dagaalka lagula jiro al-Shabaab iyo ka shaqeynta sidii loo gaari lahaa amni iyo xasillooni waarta guud ahaa dalka Soomaaliyeed.